यौन – नेपाल रफ्तार
एजेन्सी : पुरुषले सेक्सका बारेमा धेरै कुरा गर्छन् भने महिलाले सेक्सको चाहना धेरै राख्छन् ।यसको कारण तल दिइएको छः १. यसले शारिरिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छः सेक्सप्रति एडिक्टेड हुनुमा यसको नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । राम्रो सेक्स धेरै मानिसहरुका लागि अपरिहार्य कुरा हो । भोक लाग्दा खाना खाए जस्तै शरिरले मागेको बेलामा सेक्स गर्नु पनि साधारण कुरा हो । आजकाल धेरैजसो महिलाको आफ्नो पुरुषले शारिरिक सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसकेको कुराहरु धेरै सुन्न पाइन्छ । २. आफ्नो बारेमा राम्रो ...
आइतबार, आषाढ २७, २०७८
सेक्स गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ कारण
यौन सम्पर्क (सेक्स) गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् । सेक्सका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्तन मिच्ने समेत गर्छन् । यौन सम्पर्कअघि यौन उत्तेजना बढाउन स्तन मिच्ने गरेपनि यौन सम्पर्कका क्रममा स्तन मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ । यौन पार्टनरको स्तन मिचेर आनन्द उठाउने पुरुषहरूको लागि एउटा अध्ययनको निष्कर्ष खुशी दिने खालको छ । युसी बर्कली र लरेन्स बर्कली राष्ट्रिय प्रयोगशालाले स्तन मिच्दा वा निचोर्दा क्यासनको सेल्स दू्रतगतिमा बढ्न न...
एजेन्सी : बृद्धअवस्था र दीर्घजीवन यी दुई चिज कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन् । यद्धपी विज्ञानलाई विश्वास गर्ने हो भने अध्ययन, शारीरिक व्यायम र स्वस्थ खानपान जस्ता बानीले जीवनलाई केही बर्ष बढाउन सक्छ । एक स्वस्थ शरीरका लागि यी तीन चिजका अलावा अध्ययनकर्ताहरुले अर्को एक चिज समेत थपेका छन् । त्यो हो सेक्स । अनुसन्धानकर्ताहरुहरु भन्छन्, नियमित यौनसम्पर्क (सेक्स) गर्ने व्यक्तिमा गम्भिर बिरामी हुने सम्भावना कम रहन्छ । उनीहरुले नियमित यौन सम्पर्कबाट शारीरिक सन्तुष्टि मात्रै होइन यसले मु...
बुधबार, आषाढ ०२, २०७८
एजेन्सी : पछिल्लो समय विश्वमा यौन सम्बन्धी कयौं शीर्षकमा रिसर्च हुन थालेका छन् । सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले सर्वसाधरणहरुसँग धारण बुझेर बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । विज्ञहरुको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर, यौन सम्पर्कलाई खानपानले पनि असर गर्ने हुँदा ठ्याक्कै यति नै पटक हुन्छ भन्ने हुँदैन । औषतमा भन्ने हो भने एक रातमा ४ पटकसम्म राम्रो यौन सम्पर्क हुन सक्ने अनुसन...
आइतबार, जेठ १६, २०७८
महिलाको सर्वाधिक यौन उत्तेजना अंगबारे रोचक जानकारी
एजेन्सी : योनीमार्गको अघिल्लो भागमा तथा पिसाब खुल्ने प्वालको साइडमा हुने एकदेखि तीन इन्च लामो सिमी आकारको भागलाई ग्राफेनबर्ग स्पट भनिन्छ । छोटकरीमा जी स्पट । यसलाई महिलाको सर्वाधिक उत्तेजना क्षेत्र मानिन्छ । जी स्पटबारे सन् १९४० देखि नै अध्ययन गरिए पनि यसको आकार, अवस्थिति तथा परिभाषालाई लिएर निकै विवाद छ । सन् २००९ मा गरिएको ब्रिटिस अध्ययनको निष्कर्षअनुसार भौतिक रूपमा जी स्पट भन्ने नै हुँदैन । यो त केवल व्यक्तिगत अनुभूति हो । तर, अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरी गरिएको अर्को अध्य...
शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
युवती भन्दा विवाहित महिलासंग किन आकर्षित हुन्छन् पुरुष ?
काठमाडौँ : आजभोलि विवाहित महिलामाथि अन्य पुरुषहरूले आँखा लगाउनु साधारण नै भइसकेको छ । हामीले यस्तो घटना देख्दै र सुन्दै पनि आइरहेका छौँ । आखिर किन पुरुषहरूले आँखा लगाउँछन् त ? विवाहित महिलालाई जान्नुहोस् कारण यदि कुनै विवाहित महिला आफ्नो सबै काम सही ढंगमा गर्छिन् र सधैँ अनुहारमा मिठो मुस्कानका साथ बोल्छिन् भने यस्ता बानीले पुरुषलाई आकर्षण गर्ने गर्दछ । विवाहित महिलाले आफ्नो पार्टनरका साथै सम्पूर्ण परिवारको कियरिङ गर्दछन् । जसले गर्दा पुरुषहरू विवाहित महिलासँग नजिकिन खोज्द...
महिला-पुरुषका अहिलेसम्म नखुलेका यी शारिरीक सुखभोगका १५ रहस्य
काठमाडौ : मानिसहरुको शारिरीक सुखभोग जीवनलाई लिएर अनेक खालका खोज अनुसन्धान भएका छन् । अहिले पनि यी कुराहरु खोज तथा अनुसन्धानको पाटो बन्दै आएका छन् । आज हामी एक नयाँ अध्ययनका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं । शारिरीक सुखभोग इच्छाको कुरा गर्दा पुरुषहरू बिहान उत्साहित हुन्छन् जबकि महिलाहरु सुत्नु अघि अर्थात बेलुका हुन्छन् । यसको कारण जान्न तपाईलाई पनि इच्छा भएको हुनुपर्छ । आज हामी यस अध्ययनका बारेमा चर्चा गर्छौ कि आखिर महिला बेलुका र पुरुष बिहान रहर गर्नुको खास कारण के हो ? आउँनुह...
शनिबार, जेठ ०८, २०७८
बन्दा बन्दिमा : बदलिएको यौन जीवन
गोपाल ढकाल, काठमाडौँ : लकडाउनले गर्दा अहिले व्यक्तिहरु फुर्सदिलो भएका छन। के गरेर समय बिताउने ? धेरैमा छट्पटी पनि बढेर गएको छ । लकडाउनको समयलाई सिर्जनशील रुपमा बिताउन नजान्दा यौनमा झनैबढी ध्यान जानसक्छ । तनावका बेला अन्य कार्यमा रुचि नजाने र यौनलाई नै आनन्द र मनोरञ्जनको प्रमुख माध्यम बनाउन सक्ने जोखिम पनि बढेर जान्छ । यौन सम्पर्कका बेला मस्तिष्कबाट अक्सिटोसिन, डोपामिन, एन्डोरफिनजस्ता खुशी र आनन्द दिने रसायनिक तत्त्वको उत्पादन हुन्छ । यसकारण पनि व्यक्ति यौनकर्मप्रति बढि लालायि...
यौन सम्बन्ध पछि महिलालाई हुन्छ यस्ता फाइदा
काठमाडौँ : महिलाहरुले यौन सम्पर्कका समयमा अत्यन्त आनन्द प्राप्त गर्दछन, सँगै उनीहरुका लागि बिभिन्न किसिमका मानसिक तथा शारीरिक फाईदा पनि हुन्छ । यौन सम्पर्कले महिलाहरुको शारीरिक संरचनामा समेत परिवर्तन आउँदछ । यौनसम्पर्कका समयमा सेक्स पार्टनरबाट प्राप्त भावनात्मक सहयोगले महिलाहरुमा आत्मविश्वास बढ्दछ । यौन सम्पर्कको चाहान हर समय हुने भए पनि रजस्वला सकिएको ५ देखि ७ दिनसम्म महिलाहरुमा यौन भावना ज्यादा हुने गर्दछ । मासिक चक्र पुरा भएपछि सेक्स हार्मोन सक्रिय हुने गर्दछ । महिनावा...
यौन सम्पर्क गर्दा हुन्छ यस्ता १० फाइदा
काठमाडौँ : हाम्रो समाजमा यौन सम्बन्धि कुरा गर्न लाज मानिन्छ तर, खास कुरा यो हो कि नियमित सेक्स राम्रो स्वास्थ्यको साँचो हो । सेक्सबाट ब्लड प्रेसर कम हुन्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार आउँछ । एक सर्वेका अनुसार नियमित यौन सम्पर्कबाट मुटुरोगको सम्भावना पनि कम रहन्छ भने राम्रोसँग गरिने यौन सम्पर्कले मानसिक तनाब पनि काम हुन्छ । जो व्यक्ति नियमित यौन सम्पर्क गर्छ उ बिरामी हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । नियमित यौन सम्पर्कले मानिसलाई शारीरिक रुपमा फिट रहन मद्दत गर्नुका साथै दिमागी क्षमता...
सुवागढी नाकाबाट पहिलो पटक जुम क्रेन आयात